Ukuhlukaniswa kwebhlokhi likaLarsen C e-Antarctica kuseduze | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ibutho le-Larsen C block e-Antarctica seliseduze
Njengoba kushiwo kwezinye izindatshana, ukuzinza kwe-Antarctica kubalulekile esimweni sezulu seplanethi. Ngokufudumala kwembulunga yonke, amazinga okushisa aphakathi komhlaba wonke ayanda, kube nomphumela wokuncibilika kwamakhekheba eqhwa asezindaweni ezibandayo, iNorth Pole kanye nezwekazi eliqandisiwe.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, iqhwa elikhulu e-Antarctica laqhekeka ngenxa yamazinga okushisa anyukayo. Ibhlokhi lingamakhilomitha-skwele angama-5.000 XNUMX endaweni futhi lihlala eshalofini leqhwa laseLarsen C. Ubucayi bethimba laleli bhulokhi ukuthi, ngenxa yobukhulu bayo, ingashintsha ibalazwe le-hemisphere eseningizimu unomphela.
1 Ukutholakala kwebhulokhi eLarsen C
2 Iphrojekthi yaseMidas
3 Ukubaluleka kokuphuka
Ukutholakala kwebhulokhi eLarsen C
Ukuze sisho ubucayi bendaba, siqala ngokubheka esikalini sokubona salo mcimbi: isilinganiso somuntu nesokuma komhlaba. Okokuma kokuqala, leli qembu kanye nalolu shintsho luqala ukuqondisa i-Antarctica iye ekubhujisweni ngokuhamba kancane. Kodwa-ke, ngokwesilinganiso sokuma komhlaba, lokhu kwenzeka ngokuphazima kweso.
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-30 kuxwayiswa lokho ingxenye esentshonalanga ye-Antarctica isiqalile ukuncibilika. Ngaphandle kokukhuphuka kwamazinga okushisa embulungeni yonke okubangelwa ukuguquka kwesimo sezulu, imbobo enkulu kusendlalelo lwe-ozone iyatholakala nase-Antarctica. Lezi zinto zibangela ukuthi i-Antarctica incibilike ngokweqa nangemingcele.
Ibhulokhi enkulu ebizwa ngeLarsen C iyahlukaniswa futhi yehlukaniswe nalo lonke ithala leqhwa futhi lokhu kungaba yisandulela sokuwa kwezwekazi elifriziwe. Ukube ibhulokhi laseLarsen C belingavalwa ngokuphelele, inani elikhulu lamadolobha asogwini emhlabeni wonke angakhukhula. Amaphethelo ebhulokhi likaLarsen C ancibilika ngesivinini esisheshayo, sengathi yizindonga zenqaba yesihlabathi. Ngaphakathi kunezibazi ezidala ukuqhekeka okukhulu kangangokuba zifinyelela kumamitha-skwele angama-400.
Inkomba yokufudumala kwezindawo zase-Antarctic kube ngamanzi oLwandle i-Amundsen. Emashumini eminyaka edlule isishise ngaphezu kuka-0,5 ° C, futhi lokhu kubangela ukwanda kwezinga lapho iqhwa lincibilika futhi liqhekeka khona. Phakathi kuka-2015 no-2016, iqhwa elikhulu elingamakhilomitha-skwele angama-360 laqhamuka, lasuka ogwini lolwandle. Izibikezelo zokwenyuka kwezinga lokushisa, kulokhu kweLwandle lwaseWenddell elincikene neLarsen C, isilinganiso esingu-5 ° C. Lesi yisizathu esenza ukuthi amashalofu amaningi eqhwa ancibilike ngokuphelele.
Uma lokhu kuqhubeka, ibhulokhi laseLarscen C lizoba yiqhwa elikhulu kunawo wonke elirekhodiwe emlandweni. Kungaba nobuso obufana noMphakathi Ozibusayo waseCantabria.
Iphrojekthi yaseMidas yenziwe yithimba locwaningo oluhlanganyelwe oluvela emaYunivesithi aseSwansea nase-Aberystwyth. Le phrojekthi ifundile futhi yaphetha ngokuthi ngenxa yomthelela odalwe ukuqhekeka kwebhulokhi, ukuhlukaniswa kweqhwa kulindeleke ukuthi kwenzeke kungekudala. Lapho bekhuluma ngokuzumayo, basho ukuthi kuyindaba yamasonto, ngoba ukuqhekeka sekuvele kuthathe ukujika okungama-90 ° futhi lokhu kuvame ukuholela ekuqhekekeni.
Ukubaluleka kokuqhekeka kweqhwa laseLarsen C ukuthi iqhwa elizophuma lixazululwe ochungechungeni lweziqhingi. Kodwa-ke, lonke leli shelufu leqhwa litholakala ngaphezu komcengezi ongamakhilomitha ayi-5.000 XNUMX ukujula futhi lokhu kwenza kube sengozini yokushisa kwamazinga olwandle. Ngakho-ke uma i-Larsen C ice block incibilika futhi iwa ingasheshisa ukuncibilika kweshelufu lonke futhi ngezinga abakwenza ngalo lokho, Kungakhuphula izinga lolwandle ngamamitha amathathu, kugcwale amadolobha wonke emhlabeni jikelele.
Umhlaba usixwayisa ngemiphumela yokufudumala kwembulunga yonke futhi ukutholakala kwebhulokhi likaLarsen C kuyisixwayiso nje esincane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ibutho le-Larsen C block e-Antarctica seliseduze
Izici nokubaluleka kwe-stratosphere